Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Ugu yaraan 27 qof ayaa ku dhintay musiibo ka dhacday kanaalka Ingiriiska
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • saaciday inay • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Muhaajiriin ka badan oo sharci-darro ah ayaa ka tagay xeebaha waqooyiga Faransiiska si ka duwan sidii caadiga ahayd si ay uga faa'iidaystaan ​​xaaladda badda oo deggan Arbacadii, in kasta oo biyuhu ay ahaayeen kuwo aad u qabow.
Tirada tahriibayaasha sharci darrada ah ee isticmaala doomaha yar yar ama doonyaha si ay uga gudbaan kanaalka Ingiriiska ayaa aad u kordhay sanadkan, inkastoo ay jiraan khataro badan oo ka iman kara masiibooyinka badda.
Sida laga soo xigtay booliiska Faransiiska iyo mas'uuliyiinta maxalliga ah, ugu yaraan 27 qof ayaa ku dhintay masiibadii ugu dambeysay, iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan kanaalka Ingiriiska oo ka yimid Faransiiska una socday England markii doon yar oo ay la socdeen ay ku degtay xeebaha woqooyi ee Calais, France.
Duqa magaalada CalaisNatacha Bouchart, ayaa maanta sheegtay in dhimashadu ay gaartay 27 qof, daqiiqado ka dib markii duq magaalo kale uu sheegay in 24 qof.
Booliiska Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 27 qof ay dhinteen.
Franck Dhersin, oo ah ku xigeenka madaxa gaadiidka gobolka ahna duqa magaalada Teteghem ee waqooyiga xeebta Faransiiska ayaa sheegay in dhimashadu ay gaareyso 31 qof, waxaana weli la la’yahay labo qof.
The UNUrurka caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku tilmaamay dhacdadan khasaarihii ugu balaadhnaa ee hal mar ee ka dhaca kanaalka Ingiriiska tan iyo markii ay bilaabeen ururinta xogta 2014-kii.
Mid ka mid ah kalluumeysatada ayaa wacay adeegga gurmadka ka dib markii uu arkay doon faaruq ah iyo dad dul sabeynaya oo aan dhaqdhaqaaq lahayn meel u dhow.
Saddex doonyood iyo saddex helikobter ayaa la geeyay si ay uga qaybqaataan baaritaanka, maamulka deegaanka ayaa sheegay.
Ra’iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex ayaa ku tilmaamay doonta degtay mid musiibo ah.
"Fikradaydu waxay la jirtaa kuwa badan oo la la'yahay iyo kuwa dhaawacmay, dhibanayaasha mukhalasiinta dambiilayaasha ah ee ka faa'iidaysta dhibkooda iyo rafaadka," ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Raiisel wasaaraha UK Boris Johnson ayaa sheegay inuu aad uga naxay oo uu uga naxay oo uu aad uga xumaaday khasaaraha nafeed.
"Fikirkeyga iyo naxariisteyda waa dhibanayaasha iyo qoysaskooda waana arin naxdin leh oo ay soo gaareen. Laakin masiibadani waxay hoosta ka xariiqaysaa sida ay khatarta u leedahay in habkan looga gudbo kanaalka,” ayuu raaciyay.
Johnson waxa uu wacad ku maray in dowladiisa aysan “dhagax ka tagi doonin si ay u burburiso soo jeedinta ganacsi ee dadka wax tahriibiya iyo burcadda” ka dib markii uu gudoomiyay kulanka guddiga gurmadka ee dowladda ee isgoysyada.
Horaantii Arbacadii, wasaaradda arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegtay in maraakiibta ilaalada ee Faransiisku ay biyaha ka heleen shan meyd ah iyo shan kale oo miyir la’aan ka dib markii kalluumaysato uu u digay maamulka.
Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordheyso xiisadda u dhexeysa London iyo Paris ee ka dhalatay tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka gudbaya Kanaalka.
Tirada tahriibayaasha sharci darrada ah ee isticmaala doomaha yar yar ama doonyaha si ay uga gudbaan kanaalka ayaa aad u kordhay sanadkan, inkastoo ay jiraan khataro badan.
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta UK, in ka badan 25,000 oo qof ayaa hadda yimid sanadkan ilaa hadda, taas oo horey u saddex jibaartay tirada la diiwaan geliyay 2020.
Britain ayaa ku boorisay Faransiiska inuu qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah kuwa isku dayaya inay safarka galaan.